Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na 9 Offshore Justification & Bank Accounts na 17 Mba
Anyị anọwo na-enye ọrụ dịgasị iche iche nke ụlọ ọrụ na ọrụ nlekọta maka 30 Afọ, gụnyere mba ụwa Onye nhazi Director na aka ndi ozo, Onye Nlekọta Nominee bụ 100% na mbupu na azụmaahịa nke aka ya - nke pụtara na ọ bụ ezigbo onye ahịa na-achịkwa njikwa ụlọ ọrụ na-abụghị nke ikike ụtụ isi gị ugbu a.
Anyị ejirila 9 gọọmenti kachasị aka anyị na-ahọrọ ịrụ ọrụ, chọpụta na ọ bụ ihe kacha mma ma na-enye nchebe.
Onye nchịkwa na onye na-ekere òkè anyị na-anọchi anya site na ntinye aka, anyị debara Ndekọrịta Ọrụ Ozi n'etiti onye ahịa na onye ntinye aha. Nke a gụnyere Nkwupụta nke Atụmatụ nke na-achịkwa ụzọ ụlọ ọrụ na-agba ọsọ, ọrụ nnochite anya na ọkwa nke na-akọrọ Onye nwe ya bara uru.
Ọrụ a na-enye onye nwe ụlọ bara uru kachasị ihe nzuzo na nzuzo dị ka aha aha onye ahụ ga-apụta na akwụkwọ ndị ụlọ ọrụ, na azụmahịa ọ bụla, azụmahịa nke ụlọ akụ na ndekọ azụmahịa. Nke a na-egosikwa na "njikwa na njikwa" nke ọrụ ụlọ ọrụ na-eguzo n'èzí n'èzí mba ọ bụla dị elu.
Ihe oru nke onye choputara na oru nke ulo oru ahu ga - adi iche site na ikpe, ya mere, a kwadoro ugwo maka oru a ma kwenye n'etiti ndi otu n'otu.